Posted by Tranquillus | Jona 7, 2018 | vokatra
Miasa eo amin'ny birao iray ianao, noho izany dia azo antoka fa amin'ny fotoana mandany fotoana be indrindra.
Ny asa aman-draharahanao dia tokony hitondra anjara biriky amin'ny vokatrao raha toa ka mihetsiketsika sy mahatsikaiky, tsy afaka miasa tsara ianao.
Fantaro izany, ny birao marim-pototra ihany no hanaoampitomboy ny adinonao.
Ny antontan-taratasy dia manangona, ny taratasy manidina dia manarona ny birao manontolo, ny kavina ary ny sisa tavela avy amin'ny sakafo faratampon'ny farafaharatsiny dia tsy manao zavatra ratsy kokoa.
Aza manakorontana, miaraka amin'ny fandaminana kely dia azo atao ny manome fiainana faharoa ao amin'ny toeram-piasana.
Ireto ny soso-kevitra momba ny fandaminana ny sehatr'asa.
Atombohy amin'ny fametrahana ny zava-drehetra ao amin'ny toeram-piasana misy anao:
Ity ny dingana voalohany ahafahana mifantoka tsara amin'ny sehatry ny asa-workspace.
Ataovy lisitra izay rehetra ilainao eo amin'ny biraonao.
Ny sokajy Classify sy ny vondrona araka ny haavon'izy ireo sy ireo izay handroaka.
Raha misy zavatra ampiasanao latsaky ny indray mandeha isan-kerinandro, toy ny lavaka fantson-tsambo na ny mpangalatra, aza misalasala manala azy ao amin'ny cabinet na ny vatasarihana.
Tsarovy ihany koa ny hamaha ny penina rehetra ary tsy manao afa-tsy izay miasa.
Tokony hijanona tsy te-hitazona ireo zavatra izay tsy miasa intsony isika, ka tsy misalasala manipy isika.
Apetraho eo amin'ny rantsana ny zava-dehibe rehetra ho an'ny asanao:
Mba hananana sehatra fiasana tsara, ny zavatra rehetra ilainao dia eo amin'ny rantsan-tànanao.
Ohatra, raha mandray an-tsoratra foana ianao rehefa mandeha amin'ny findainao, eritrereto ny hametraka ny efitranonao eo akaikin'ny telefaona.
Toy izany koa ny penina na ny kalandrie.
Ny tanjona dia ny hanamaivana ny hetsika ary tsy hikatsaka ny hikaroka ny pen na ny taratasy mivalona raha toa ianao ka mifampiresaka amin'ny ohatra.
HAMAKY Ny tolotra amin'ny aterineto tsara indrindra amin'ny fandefasana rakitra lehibe tsy misy fisoratana anarana.
Mikarakara ny sehatr'asa misy anao:
Rehefa manana ny lohanao ao anaty rakitra ianao dia tsy mahatsapa mandrakariva ny korontana mihanaka ao amin'ny toeram-piasana.
Zava-dehibe àry ny maka fotoana hanadiovana ny birao.
Aza adino, izany koa fitaovana fiasana.
Mba hanampiana anao hihazona ny sehatr'asa, afaka manangana fombafomba fanao isan'andro ianao.
Alohan'ny handao ny birao, ohatra, andramo ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra mba hanadio sy handamina ny toeram-piasana.
Farany, ankoatra ny fitahirizana, tsy maintsy mieritreritra momba ny fanadiovana ny birao sy ireo singa izay arotsaka any.
Mazava ho azy, raha manana ny fahafahana manararaotra ny serivisy amin'ny mpikarakara fikojakojana ianao dia tsy voatery hisalasala amin'izany.
Ahoana no fomba handaminana ny sehatrasanao? Aogositra 24th, 2018Tranquillus
Teo alohaNahoana no mipetraka sy miasa any Frantsa?
manarakaNahoana ianao no tsy maintsy mivoaka amin'ny masinina?